Umambo hwaMwari—Nei Tichifanira Kuda Kuziva nezveUmambo hwaMwari?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Maya Mazatec (Huautla) Mongolian Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Zande Zulu
Mamiriyoni evanhu anoisa tariro paUmambo hwaMwari. Vanotevera muenzaniso wakasiyiwa naJesu, uyo akadzidzisa vateveri vake kunyengetera vachiti: “Umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika.”—Mateu 6:10, Bhaibheri Dzvene.
Vanhu vakawanda vanoda chaizvo kuziva nezveUmambo hwaMwari asi zvitendero zvakawanda hazviwanzotauri nezvahwo. Nezvenyaya iyi, munyori wenhoroondo H. G. Wells akaona kuti Jesu ‘ainyanya kudzidzisa nezvehwaaiti Umambo hweKudenga,’ asi Wells akati dzidziso iyi ‘kashoma kuti itaurwe nezvayo pakudzidzisa kunoitwa mumachechi akawanda echiKristu.’
Kusiyana nemachechi iwayo, Zvapupu zvaJehovha zvinonyanya kutaura nezveUmambo hwaMwari. Funga izvi: Magazini yatinonyanya kushandisa, yauri kuverenga iye zvino, inobudiswa mumitauro 220. Makopi anoda kusvika mamiriyoni 46 anodhindwa, zvichiita kuti ive magazini inowanikwa kupfuura mamwe pasi rose. Shoko guru remagazini iyi nderipi? Ona kuti musoro wayo wakazara unoti: Nharireyomurindi Yokuzivisa Umambo hwaJehovha. *
Sei Zvapupu zvaJehovha zvichishanda nesimba pakuzivisa Umambo hwaMwari? Chimwe chikonzero ndechokuti tinotenda kuti Umambo hwaMwari ndihwo dingindira reBhaibheri, bhuku rinokosha kupfuura ose pasi rose. Uyezve tine chokwadi chokuti Umambo hwaMwari ndihwo chete huchapedza matambudziko evanhu.
Zvapupu zvaJehovha zvinoparidza nezveUmambo hwaMwari zvichiedza kutevedzera muenzaniso waJesu. Achiri panyika Jesu ainyanya kukoshesa Umambo hwaMwari muupenyu uye muushumiri hwake. (Ruka 4:43) Nei Umambo hwaikosha zvikuru muupenyu hwake? Uye hunogona kukubatsira sei? Tinokukumbira kuti uone kuti Bhaibheri rinopindura sei mibvunzo iyi munyaya dzinotevera.
^ ndima 5 Jehovha ndiro zita raMwari riri muBhaibheri.